NextMping | InoteveraMapping ™ makochi
InoteveraMapping ™ makochi
Iwe unonzwa uine chivimbo nezveramangwana here? Iwe unofara nezve zvinogona kuitika kwauri nebhizinesi rako mune ramangwana? Ko kambani yako ine marongero nemidziyo yekutungamira shanduko?
Yedu NextMping ™ makochi uye avanopa mazano vachakupa iwe maitiro, tsigiro uye kutungamira kuti ugadzire ramangwana rako rakanakisa. Wese munhu anobudirira anoshandisa bhizinesi makoji kana hutungamiriri kudzidzisa nenzira yemuperekedzi / mukoti / gwara.
Yedu NextMping ™ yakavimbiswa bhizinesi makochi anozobatana newe kuvaka zano, kukurudzira ramangwana rako rebasa mindset uye kukubatsira kukudziridza hunyanzvi hunodiwa kuti iwe ubudirire uye uwedzere kukurumidza panguva yekubudirira uye yekukurumidza kuchinja nguva.
Sangana NeNeMeMeMote ™ Coqeqeshi yedu
Cheryl Cran ndiye muvambi weNextMapping ™ / NextMiling.com uye CEO wevabereki kambani Synthesis ku Work Inc.
Kuzivikanwa se # 1 Ramangwana reBasa inosimudzira naOnalytica, uye munyori wemabhuku 9 kusanganisira bhuku repiri ra “NextMping ™ - Aniticape, Famba uye Gadzira Iyo Ramangwana Yebasa”Nemumwe bookbook. Mamwe mazita ebhuku anosanganisira “Iyo Art yeKushandura Hutungamiri - Kutyaira Shanduko Mune Inokurumidza Paced-Pasi"(Wiley 2015),"101 Nzira dzeKugadzira Generations X, Y uye Zoomers Vanofara Pabasa”(2010) nemamwe mabhuku mana pahunyanzvi hwekutungamira hunodiwa kuti ramangwana rive rakagadzirira basa.
Ramangwana raCheryl rebasa rekufunga hutungamiriri rakaburitswa muzvinyorwa zvakaita seHuff Post, Forbes, IABC Magazine, Law Magazine, Metro New York, Entrepreneur Magazine, Readers Digest, CBS Online, NBC Online, Fox Online nezvimwe. Kweanopfuura makumi maviri emakore Cheryl akavaka mukurumbira wekuunza kukosha kunoshamisa kune vatengi zvinosanganisira AT & T, Bell Mobility, Omnitel, Gartner, Briteni Telcomm, Manulife, pamwe nemakambani epakati nepakati uye vezvemabhizimusi mumaindasitiri anosanganisira tekinoroji, hutano, kurima, mari, inishuwarenzi nezvimwe.
NextMping ™ yakagadziriswa seyemari bhizinesi solution brand iyo inosanganisira yese yebasa raCheryl nekutsvagira ramangwana rebasa uye hutungamiriri hunodiwa kuti vafambise shanduko pabasa. Inguva yekuti usangonzwa nezveramangwana asi kuti ushandise NextMping ™ kuti usvike ikoko! Tekinoroji munzvimbo yebasa inofanirwa kushandiswa kugadzirira ramangwana nekutarisa kuti tekinoroji ingasimudzira sei zvabuda muvanhu.
Musoro wenguva dzose wehupenyu hwaCheryl hwehupenyu ndewe 'vanhu kutanga' uye nzira yechipiri yedhijitari yekugadzira ramangwana rakawanda revanhu, kubatsira makambani kuvaka kugona kwekutungamira kunodiwa 'kuchinja nyika kuburikidza nebhizinesi.'
Batanidza nesu nhasi!
Crystal Metz inyanzvi yakabudirira muzvinabhizimusi uye mutungamiriri wechikwata. Isu tinofara kuva neCrystal sewemabhizimusi edu akatarisana neNextMping ™ kochi.
SaYeMeMoMo- coqeqeshi, Crystal inounza drive, shasha uye yakateedzerwa track rekodhi kuti ibatsire vatengi vake kuti vagadzire kubudirira, kuputsa zvipingamupinyi pakubudirira uye kugadzira matanho matsva ekugadzira izvo zvinotevera.
Iye ndiye muridzi weCrystal Metz Insurance, kambani ye # 1 inishuwarenzi. Kubvira pakatanga Crystal Metz inishuwarenzi yakawedzera vatambi vayo uye vari pasi pehutungamiriri hwaCrystal inoenderera mberi ichikura kunyangwe iri mune indasitiri iri kukurumidza kuchinja indasitiri pagore. Crystal anoratidza kubudirira kwake samuzvinabhizimusi pakuzvarwa uye kurerwa mumhuri yekurima. Achiri mudiki, akadzidza hunyanzvi hwekutarisira, kushanda nesimba uye kutsungirira pamwe nerudo rwebhizimusi.
Muzvinabhizimusi kubva pazera diki, mumakore ake ekutanga makumi maviri akavhura yake yekutengesa zvivakwa, CENTURY 20 Medellis Realty. Kusvetuka uku kwakamanikidza Crystal kuti idzidze nekukasira, kuchinjira pakutungamira timu uku uchinzwisisa zvakakosha zvebhizinesi. Mumakore mashanu aakamhanya nekushandisa yake real estate franchise, kukura kwake uye ruzivo rwekuti chii uye chii chaisaite zvidzidzo zvakadzidzwa uye hazvina kumbokanganwa. Crystal akachinjisa bhizimusi rake kutarisa kune inishuwarenzi uye akavhura Crystal Metz inishuwarenzi. Anoti kubudirira kwake kuchikwata chake - akavaka bhizinesi rake nekutsvaga vanhu chaivo uye nekugovana hutungamiriri. Chikwata chake kuvimbika uye kuita chimwe chezvinhu zvake zvaanozvikudza seanamuzvinabhizinesi. Maitiro eCrystal ehutungamiriri ndeyekubata zvakatarisirwa zvakanyanya uye zviyero apo achirairidza uye achitungamira timu yake mune yakagovaniswa hutungamiriri tsika.
SeNe NextMping ™ karaivhi Crystal's drive yekubudirira pamwe chete nekutarisa kwake kune vanhu zvipo zvake zvikuru. Anopa vanhu mukana kuti vaongorore chinoita kuti vafare semuzvinabhizimusi uye somunhu uyezve vanopa kukurudzira uye nzira dzekukubatsira iwe kuti uzvitsvakire.
Chido chake ndechokubatsira vanhu kuvaka uye kusimbisa kugona kwavo, kuwana chivimbo, kuvabatsira kuti vakure uye kuti vakwanise kuita zvisingaite.
Crystal inobatsira vanamuzvinabhizimusi nekutsvaga kwemusika, bhizinesi, mhinduro dzezvikwata uye kuronga zvine hungwaru. SeNe NextMping ™ makoji Crystal anobatsira bhizinesi rako kukura kusvika kune imwe nhanho iwe yausina kumbofungidzira. Anounza kukosha kukuru semushambadzi wemabhizimusi anofamba famba uye ane rakaratidza kubudirira rekodhi.
Kuti uwane zvimwe pamusoro peMabhizimusi Ekudzidzisa neCrystal enda apa: https://nextmapping.com/nextmapping-coaches/entrepreneur-coaching/
Seye NextMping ™ hutungamiri hwekutevedzera Reg ane yakawandisa kumashure semutungamiri wepamusoro mubhizinesi kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu.
Maitiro ake kumashure anosanganisira basa raiyemurwa mubhanga rekubhengi, kugadzira zvirongwa zve e-commerce zviviri zvezvitengesi zvikuru zveCanada (Best Buy uye Ramangwana Shop) uye semuzvinabhizimusi uye muridzi wemakambani matatu akabudirira.
Reg ine rakawanda bhizinesi uye kubvunzana ruzivo zvinosanganisira kurongeka kwemasangano uye kuvandudza, ongororo yekurwisanisa uye manejimendi, hutungamiri nekuvandudzwa kwechikwata uye zvinobudirira mazano e-commerce uye kuita.
Dzidzo yaReg inosanganisira Master of Arts Degree muKukakavara Kuongorora & Management kubva kuRoyal Roads University.
Akazvipira kubatsira mukuvandudza kusimudzira nekusimudzira kwemabhizinesi pamwe nevashandi pamatanho ese nekuvapa zvigadzirwa zvitsva, zvinogadzirisa zvinogadzirisa kwete kukurudzira uye nekukwanisa kuita kwakanyanya uye kukura asi zvakare zvinobvumidza makambani kuwana, kuvhura uye kuburitsa zvinogoneka zveumwe neumwe wavo. vashandi.
Chido chaReg ndechekubatsira vatungamiriri kuwedzera kubatanidzwa kwechikwata pamwe nekubatsira vatungamiriri vepakati-nhanho kukwira kuzvinzvimbo zvepamusoro.
Vatungamiriri uye nhengo dzechikwata idzo Reg dzakadzidzisa zvinogara zvichidaro kuti anopa hunhu hwakajeka, ruzivo nezviridzwa kuvabatsira kubudirira mumabasa.
Maitiro aReg seNextMping ™ kochi yakatwasuka, inoongorora uye inotarisisa nechinangwa chekubatsira vanhu kuti vabudirire.
Ashley Farren is a Certified NextMapping ™ kochi uye mupi wezano. Isu tinofara kuva naAshley pane NextMapping ™ timu.
Ashley anonzwisisika zvakanyanya, ane zano uye anoshanda. Ane nhoroondo yakakura yekubudirira muzvirongwa zvekuronga zvemakambani epasi rese.
Nhoroondo yake yebasa inosanganisira 12 makore muSouth mune Strategic HR Bhizinesi Partner robo anoshanda kune Multinational makambani kumarudzi akasiyana maindasitiri anosanganisira Hi Tech, FMCG, Mining.
Kwemakore matanhatu, Ashley akashandira Autodesk, zvinehunyanzvi achitungamira basa reHR reGlobal Engineering basa kusanganisira maviri makuru nzvimbo dzekunze muSingapore neShanghai (vashandi mazana maviri nemazana maviri) nezvikwata muUS & Europe.
Izvi zvisati zvaitika, akapedza makore 12 ku Unilever achishanda mhiri kweAsia, Africa, Middle East ichitsigira mabasa mazhinji ebhizinesi (kusanganisira IT (Nzvimbo uye Bhizinesi Systems) / Mutengi / Kutengesa, Kushambadzira uye seManeja Ekudzidza uye Kubudirira.
Pakati peino nguva akatsigira Sangano reMagadzirirwo padunhu rekutanga basa rakagovaniswa pasi rose, nekutarisa mashandiro muAfrica mose neMiddle East, nekuwedzera kutonga kwakakura kwekutanga.
Munguva yake 22 gore rekushandira basa, Ashley akafambisa uye akaronga-akaronga-shanduko shanduko shanduro dzemasangano dzinosanganisira kuwanda kuronga / kugadziridza. Ane anotungamira ekushandura shanduko matanho uye mapurogiramu, akagadzika matarenda uye mashandiro ekugadzirisa mashandiro, akaisa kwakasiyana-siyana uye nzira dzekubatanidza dzakadzidziswa vatungamiriri vakuru nevamaneja, zvinofambiswa zvirongwa zvekupinza vashandi, zvakafambisa kumisikidzwa kwehurongwa hweHR.
Hélène Hamilton ndiye ICF akasimbiswa murairidzi uye anounza zviitiko zvakasiyana uye akawanda maitiro evatengi ekubudirira kune NextMping ™ timu.
Yake kumashure inosanganisira anopfuura 30 makore ehutungamiri ruzivo anosanganisira 15 makore semukuru wepamusoro. Hélène anounza hunyanzvi mukuvandudza kwesangano uye Hwevanhu. Vatengi vake vanotenda kugona kwavo kuvabatsira nemhinduro dzekugadzira munyika inowedzera kuoma.
Iye iye munyori we "Chakanakisisa Chakachengetedzwa Chakavanzika Chekuita Nevashandi" (2017) uye inosimbiswa muNova ™ Mbiri uye mamwe maturusi ehutungamiriri.
Maindasitiri aanoshanda nawo anosanganisira utano, veruzhinji, dzidzo uye mabhizinesi madiki.
Hélène's workshop uye makoji evatengi anokoshesa kugona kwake kuwana mamiriro nekukurumidza, kufunga kwake kwakarongeka uye nenzira yake inoshanduka yekubatsira vatungamiriri uye nhengo dzechikwata kuvaka pamusoro pesimba ravo kuti vagadzirire ramangwana.
Kugadzirira kubatana nesu uye kushanda pamwe neNeMM ™ ™ Varairidzi nevanoongorora?
Tine iwe wakafukidzwa - svikira, tinoda kuda kubatana newe.
NextMping ™ inzira yedu yekudyara iyo inobatsira masangano, vatungamiriri, zvikwata pamwe nevamabhizinesi kusimudzira kugona kwavo kufamba neramangwana uye kuve pamberi pebasa rakagadzirira izvozvi.
Ramangwana reBasa Online Zvidzidzo
Hutungamiri Kudzidzisa neanoda sarudzo yemubatsiri kutsigira vatungamiriri kukwidziridza hunyanzvi hwavo mukugadzirira ramangwana izvozvi.